Nkọwapụta niile nke sọpụrụ 20 Sọpụrụ yana ezigbo foto ha | Androidsis
Na -asọpụrụ ịmalite ekwentị flagship dị ọnụ ala Nkwanye 20 na Honor 20 Pro na -abịa na Mee 21. Tupu nke ahụ, mfu dị iche iche ekpughere atụmatụ ihu na azụ nke ekwentị abụọ ahụ.
Taa, ọnụ ụzọ mbata WinFuture ekenyela Nkọwapụta na isi ntụgharị nke Sọpụrụ 20, ihe nlereanya etiti nke ahịrị a. Anyị na -egosikwa ọtụtụ ezigbo foto nke ngwaọrụ ahụ, site n'akụkụ niile.
Dị ka akụkọ, Sọpụrụ 20 ga-eji ihuenyo 6.26-inch IPS LCD nwere oghere na akuku aka ekpe ya elu, nke nwere ihe ngosi 32-megapixel selfie snapper nwere oghere f / 2.0. Nke a bụ mkpebi FullHD + ma na -enye njupụta pixel nke 412 dpi. Na mgbakwunye, na Kirin 980 SoCyana 6GB Ram na 128GB nke ROM, ọ ga -enye ike ama.
Na -asọpụrụ 20
Ngwaọrụ a ga -ejikwa a Batrị 3,750 mAh nke a ga -eji teknụzụ chaja ngwa ngwa SuperCharge. A na -atụ anya na ọ ga -ejupụta batrị smartphone ka ọ bụrụ ikike 50%, na -ana ya naanị nkeji iri atọ. Ọzọkwa, sistemụ arụmọrụ gam akporo 30 Pie dabere na Magic UI 9 ga -ebuba ya na mbụ.
A ga -ejikwa smartphone ahụ ngwa ngwa isi ihe mmetụta Sony IMX586 48 megapixel nwere oghere f / 1.8 enyere maka OIS, oghere 117-ogo 16 MP nwere oghere sara mbara nwere oghere f / 2.2, oghere telephoto 8 MP nwere oghere f / 2.4 yana, iji mechie igwefoto igwefoto quad, oghere macro 2 MP.
Foto nke Sọpụrụ 20 na -egosi nke ahụ A kwadebere ya na onye na -agụ mkpịsị aka mkpịsị aka ya nwere bọtịnụ ike. Ekwentị ahụ ga -abata na nhọrọ agba abụọ: Sapphire Blue na Midnight Black. Njirimara ndị ọzọ nke ekwentị ahụ bụ nkwado abụọ SIM, 4G VoLTE, Bluetooth, USB-C, na Virtual Surround.
Na mbụ, Android Central ekekọrịtala onyonyo bara uru nke Sọpụrụ 20 Pro, nke bụ ihe ndị a ka anyị chọtara. Ọ na-ekwu na ekwentị ahụ nwere ọmarịcha mkpuchi '' Dynamic Holographic '' nke nwere mkpuchi iko nwere okpukpu atọ.
Ewepula akụkọ ahụ yana kwa Ọ dị ka mbipụta ahụ nwere ike kesara onyonyo nke Sọpụrụ 20A na-atụ anya na Sọpụrụ 20 Pro ga-enwe ihuenyo 6.5 inch OLED nwere ihe ngosi mkpịsị aka, 32-megapixel selfie, nhazi igwefoto quad dị elu, Kirin 980, 8 GB nke Ram. , 256 GB nke nchekwa obodo na gburugburu 4.000 mAh nke batrị na nkwado ngwa ngwa SuperCharge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Honor 20 agbaala kpamkpam: mara nkọwa ya [+ ezigbo foto]